Vaovao - Toerana fatoriana alika
Ny tompon'ny biby fiompy rehetra dia te hahalala bebe kokoa momba ny alikany, momba ny toerana fatoriana alika tiany. Ireo toerana alain'ny alika, ary ny fotoana laniny misimisy dia afaka manambara zavatra betsaka momba ny fahatsapany.
Ireto misy toerana fatoriana mahazatra ary inona no mety ho dikan'izy ireo.
Raha matetika mahita ny alikanao matory amin'ity toerana fatoriana ity ianao. Midika izany fa mahatsapa tena mahazo aina sy milamin-tsaina izy ireo amin'ny tontolo iainany. Ireo alika ireo matetika dia faly, tsy miraharaha, ary tena mahatoky. Ity toerana ity koa dia mamela ny rantsam-batany malalaka mihetsika mandritra ny torimaso, amin'izay ianao mety hahita kambana sy daka tongotra kokoa amin'ny alika mandry eo anilany.
Ity toerana fatoriana ity no matetika be indrindra, amin'ny volana fararano sy ririnina, rehefa mangatsiatsiaka ny andro, ny alika matory an'izany, mba hitehirizana ny hafanana.
Miparitaka amin'ny vavony
Ny alika matory amin'ity toerana ity, miaraka amin'ny tanany sy ny tongony mivelatra ary miondrika, matetika dia mariky ny toetra tsara. Feno hery foana izy ireo, mora ampirisihina ary faly. Ny toeran'ny safidin'ny pups izay matory mandritra ny lalao ary te-hidina amin'ny toerana misy azy ireo fotsiny.
Eo aoriana, miakatra amin'ny rivotra
Ny torimaso miaraka amin'ny kibo mibaribary dia manampy ny alika hampangatsiatsiaka toy ny fikolokoloana baolina afaka mitahiry hafanana. Ny fampisehoana ireo faritra ireo dia fomba tsara handresena ny hafanana satria manify kokoa ny volo manodidina ny kibony ary mihazona ny fihary atin'ny hatsembohana ny tohotra.
Izy io koa dia toerana iray izay manondro ny alika iray tena mahazo aina, mamela ny faritra mora saro-pady azy ireo ary sarotra ny mahazo haingana ny tongotr'izy ireo. Ity toerana fatoriana ity dia mahazatra amin'ny volana fahavaratra.
Ho an'ireo alika tia matory amin'ny tompony, dia azo antoka kokoa ny manadio, manosotra, mandro ary manao vaksiny.